काभ्रेमा नियन्त्रित लागू औषध सहित ३ जना प क्राउ – मिलिजुली खबर
काभ्रेको रोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ मंगलटार स्थित बि.पि. राजमार्ग सडक खण्डबाट नियन्त्रित लागू औषध सहित ३ जना प क्राउ परेका छन् । मंगलटार बजारमा सवारी चेकजाँचमा खटिएको प्रहरी टोलीले सवारी साधनहरु चेक जाँच गर्ने क्रममा झापाबाट काठमाण्डौ तर्फ आउदै गरेको बा.४.ख ६६७६ नं. को हायस गाडीमा यात्रा गर्ने यात्रु रोहित कुमार यादवले बोकेको झोलाबाट नियन्त्रित लागू औषध एम्पुल सहि ३ जना प क्राउ गरिएको हो ।
बनेपाको ट्राफिक प्र हरी कार्यालय नयाँ ठाउँमा सर्यो